Soo ogow shaambooyada adag ee ugu fiican | Bezzia
Shaambooyada adag ee ugu fiican
Susana Garcia | 04/04/2021 20:00 | Quruxda, Alaabta quruxda
La fikradda shaambo adag ayaa dhowaan timid, laakiin waxay noqdeen isbeddel marka ay timaado daryeelka timaheena. Taasi waa sababta aan kuugu soo bandhigi karno waxa aan u maleyno inay yihiin shaambooyada adag ee ugu fiican suuqa, nooc ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo ee ku habboon daryeelka timaha dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah, maadaama shaambo ay ka mid tahay furayaasha timaha caafimaadka qaba.
ka shaambooyada adag waxay ku yimaadaan qaab jawi ahaan u fiican, maadaama aysan badanaa haysan weel caag ah, laakiin sidoo kale, iyagoo adag, kiimikooyin yar ayaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaabkooda oo qaar badan oo ka mid ahi ay yihiin deegaan, taas oo ku habboon biyaha, oo aan sidaa u nijaasayn. Marka waxaan u maleyneynaa inay tahay waqtigii loo gudbi lahaa qurxinta adag.
1 Timaha Angel by Lush
2 Shaambo adag oo la isku qurxiyo Maria
3 Shaamboo Dr Tree laba mid
4 Valquer shaambo timo qallalan
Timaha Angel by Lush
Tani waa mid ka mid ah shirkadaha ugu badan ee ku soo baxay qurxinta adag, maadaama aysan kaliya haysan shaambooyo, laakiin sidoo kale qaboojiyaha, saliidaha iyo dhammaan noocyada waxyaabo. Shaambooyada adag ee Lush waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican waxaa laga iibsan karaa websaydhkooda waxaana jira noocyo badan. Angel Hair shampoo waa mid ka mid ah iibiyaasha ugu fiican, gaar ahaan maadaama uu yahay mid jilicsan oo ku habboon dhammaan noocyada timaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxay leedahay Ylang ylang si ay timo ugu muujiso una daryeesho. Aquafaba waxay ku dareysaa xoog iyo dhalaal, halka biyaha ubaxyada iyo sixir bararka ay ka caawiyaan daryeelka daryeelka maqaarka madaxa ugu xasaasiga ah Soy lecithin wuxuu caawiyaa nuugista maaddooyinka kale. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan arki karno dhamaan waxyaabaha ka kooban iyo midkasta oo ka mid ah waxa uu ku darsado timaheena, taas oo naga caawineysa inaan si fiican u doorano.
Shaambo adag oo la isku qurxiyo Maria
Este shaambo adag waa dabiici, vegan iyo wax lagu sameeyo. Waa timo loogu talagalay timaha dufanka leh, maadaama maadooyinkeeda ay isku dayaan inay xalliyaan dhibaatada dheecaanka saliidda ee aagga madaxa, taas oo ah dhibaatada ugu weyn ee timaha saliidda leh. Saliida jojoba ee ay kujirtaa waxay siisaa fuuq bax la'aan dareemo dufan leh. Liin dhanaanta ayaa ah waxa ka caawiya awooddiisa astringent inay nidaamiso soosaarka dufanka. Dhoobada cad ee kaolin waxay gacan ka geysaneysaa in lagu nadiifiyo madaxa madaxa wasakhda qaab jilicsan, iyada oo aan la jebin PH-ga. Soosaarida Hibiscus iyo saliida rosemary waxay ka caawisaa timaha inay noqdaan kuwa adag oo caafimaad qaba xididdada. Shaki la'aan waa xulasho wanaagsan waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo daryeelka timaha dufanka leh.
Shaamboo Dr Tree laba mid
Haddii aadan waqti badan u helin cibaadada timahaaga ama aad caajis tahay, waxaad sidoo kale iibsan kartaa shaambo adag oo labo-hal ah sida Dr. Tree. Bari shaambo udgoon qumbaha ayaa ku habboon daryeelka iyo nafaqeynta timaha. Waxay leedahay saliida argan, oo aan ognahay in loo yaqaan dahab dareere ah awoodeeda si ay uhesho una nafaqeyso. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay fiitamiinno A iyo E ah oo dib u cusbooneysiinaya una daryeelaya fiber-ka timaha. Waxay kaloo leedahay saldhig subagga kookaha ah oo daryeela madaxa. Waxa ugu fiican ee ku saabsan shaamboogan ayaa ah inay nadiifiso oo ay fuuq baxdo sidaa darteed waa inaad iska ilaalisaa isticmaalka qaboojiyaha.
Valquer shaambo timo qallalan
Dhammaan shirkadahaani waxay leeyihiin dhowr nooc oo shaambo ah, in kasta oo aan ka hadlayno mid keliya. Tusaale ahaan, kan ka socda Valquer waxaa loogu talagalay timaha qalalan, in kastoo ay jiraan noocyo kale oo timo ah. Bari shaambo timo qallalan ayaa leh saliid qumbaha qaali ah si loo waraabiyo. Waa in la yiraahdaa ma ahan shaambo ay ku jiraan gebi ahaanba maaddooyin dabiici ah laakiin sidoo kale waa wax aad u wanaagsan haddii aadan raadineynin wax vegan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Shaambooyada adag ee ugu fiican
Caanaha lowska Macadamia, faa'iidooyinka iyo sida loo diyaariyo
Dhaqan ahaan nafsiyan ahaan caafimaad oo kaa caawin kara